तिथि मेरो पत्रु » शीर्ष6कारण कुकिङ रोमान्स लागि हट छ किन
शीर्ष6कारण कुकिङ रोमान्स लागि हट छ किन
पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको: फरवरी. 21 2020 |2मिनेट पढ्न
"मानिसको हृदय गर्न बाटो आफ्नो पेट मार्फत छ।"
आत्म-भनौदाहरूले foodie रूपमा, म धेरै कारण उद्धृत सक्छ, तर यहाँ शीर्ष छन्6कारण पकाउने "हट,"विशेष गरी आज डेटिङ र सहवास दृश्य मा.
1. कुकिङ सिद्ध रोमान्स लागि "नुस्खा" प्रदान.
सबैभन्दा महिलाहरु जस्तै, म wined र courting प्रक्रिया भागको रूपमा पुरुष केटाहरूलाई द्वारा फैंसी रेस्टुरेन्ट मा dined भइरहेको मन. तर, सम्बन्ध विकसित रूप, त्यहाँ एक घर को गोपनीयता मा साझा एक घर पकाएको भोजन बारेमा कुरा धेरै "घनिष्ठ" छ— मोमबत्ती संग, एक सानो संगीत, नृत्य र अवस्था हुक्म रूपमा आफ्नो बाल तल गरौं गर्ने क्षमता. मार crème कसैले?
2. घरमा खाना पकाउने अक्सर रेस्टुरेन्ट खाने भन्दा स्वस्थ छ.
जब बाहिर खाने, धेरै पटक खाद्य पदार्थ प्रशोधन, धनी र fattening सस संग सेवा, अतिरिक्त बोसो मा तला, "सुपर आकारको" र आहार प्रतिबन्ध र खाना एलर्जी भएकाहरूले लागि उचित तयारी बिना. बाहिर भोजन एक भन्दा बढी तरिकामा महँगो हुन सक्छ.
3. पाक कौशल कुनै पनि महिला वा मानिसको रोमान्टिक रिजुम थप्न.
को डेटिंग बजार मा आफ्नो "ब्लू बुक" मूल्य वृद्धि रूपमा विचार.
यहाँ एक पुरुष लेखक हालै यस्तो लेखे के: "महिला संख्या खुल्लमखुल्ला तिनीहरूले खाना पकाउन सक्दैन स्वीकार यी दिन आश्चर्यजनक छ. जब एक महिला भन्छन् त्यो खाना पकाउन सक्दैन, राम्रो पुरुष मन को धेरै गर्न आउने पहिलो विचार "छ नरक तपाईं आफैलाई हेरचाह गर्छन् कसरी र के तपाईं कसरी मलाई हेरचाह गर्न सक्षम हुनेछ?"
4. कुकिङ तपाईं थप स्वतन्त्र र एक महिला बढी बुझे हुन अनुमति दिन्छ.
आफ्नो मनपर्ने खानाको समाधान गर्न आफ्नो आमा को लागि कुनै थप प्रतीक्षा, वा आफ्नो छिमेकी रेस्टुरेन्ट सोमवार मेनु मा हुनेछ भनेर आशा, वा ले-आउट लागि डायल; तपाईं यो आफैलाई समाधान गर्न सक्छन्!
5. कुकिङ सबै सचेत seduces.
यो सुखद aromas देखि, को प्लेट मा आँखा-अपिल व्यवस्था गर्न, रंग र बनावट को एक किसिम मा, स्वर्गीय स्वाद— राम्रो खाना धेरै स्तर मा हामी हेरचाह ती पूरा गर्न सक्छन्.
6. कुकिङ बांड रमाइलो तरिका छ.
तपाईं पकाउन सक्छ र उहाँले सलाद बनाउन सक्छ. प्रत्येक अन्य खुवाउन, अथवा शेयर कथाहरू र परम्परा परिवार व्यञ्जनहरु सम्बन्धित. कुकिङ मानिस लाड प्यार र catered महसुस. र उहाँ तिमीहरूका विशेष छ भने, उहाँलाई महसुस गर्न लागि कसरी चाहनुहुन्छ कि छैन?
र त्यहाँ सुसमाचार यहाँ: तपाईं पाक स्कूल को लागि साइन अप वा अनन्त परीक्षण र त्रुटि आफैलाई अधीनमा छैन; तपाईंको पकाउने वृद्धि गर्न चरण-चरण ट्यूटोरियल प्रदान कि धेरै अनलाइन पकाउने साइटहरु छन् I.Q.!
अर्को उपयोगी रणनीति छोराछोरीलाई लागि लेखक s किताबहरु कुक खरिद गर्न छ. तिनीहरूले भान्सा सुरक्षा सिकेर लागि ठूलो सुरूवात विन्दुमा प्रदान, मानक माप, र व्यञ्जनहरु पालन गर्न सजिलो.
सम्झना, पकाउने ठूलो तरिका छलफल गर्न छ आजको मानिसको भोक गर्न "तातो" र अपील!
पुस्तक मा Dreaming: कसरी एक राम्रो कुकुर Tamed खराब नारी